> Resource> Igwefoto> Olee naghachi Photos si Ricoh Igwefoto
Enwere m ike Naghachi ehichapụ Photos si Ricoh igwefoto?
Mmada ụfọdụ foto n'oge m ezumike na England na m Ricoh ico igwefoto dijitalụ. Ọ bụ egwu na m na-ezighị ehichapụ niile foto si m igwefoto na-enweghị na-ebufe ha ka ha m PC. Ọ ka kwe m omume na-agbake ehichapụ foto site na Ricoh igwefoto? M na-eji a SDHX kaadị na ya. Ekele.
Ricoh igwefoto dijitalụ awade ọrụ na elu àgwà ahụmahụ nke photographing. Otú ọ dị, foto gị Ricoh igwefoto dijitalụ ka nwere ike ga-efu ruru nhichapụ, kaadị ebe nchekwa formatting ma ọ bụ ọbụna usoro njehie. Ozi ọma ahụ bụ na ọ bụrụhaala na furu efu photos adịghị e overwritten site ọhụrụ data na gị Ricoh igwefoto si na kaadị ebe nchekwa, ị ka pụrụ weghachi furu efu photos na a Ricoh igwefoto foto mgbake usoro.
Wondershare Photo Recovery Ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac niile bụ ihe dị gị mkpa iji naghachi foto site na Ricoh igwefoto. Ọ Recovers ehichapụ, formatted ma ọ bụ merụọ foto gị Ricoh igwefoto dị mfe na kama mma n'ụzọ. Ọzọkwa, ị ga-enwe ike naghachi vidiyo na ọdịyo faịlụ site na gị Ricoh igwefoto dijitalụ kwa.
Ugbu a download a ikpe mbipute a omume na-amalite Ricoh igwefoto foto mgbake!
3 Nzọụkwụ naghachi Photos si Ricoh Igwefoto
Ihe mbụ mbụ, ị ga mma nkwụsị eji gị Ricoh igwefoto ma ọ bụ na-etinye ọhụrụ ọ bụla data gị Ricoh igwefoto si na kaadị ebe nchekwa ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji weghachi niile furu efu photos.
Ugbu a, ka naghachi ehichapụ foto site na Ricoh igwefoto na Windows version nke Wondershare Photo Recovery.
Nzọụkwụ 1 Wụnye na ẹkedori Wondershare Photo Recovery na kọmputa gị
Dị ka ị pụrụ ịhụ site oyiyi n'okpuru, mmalite window ga-egosi niile na-akwado ngwaọrụ na nchekwa media. Ị dị nnọọ mkpa pịa "Malite" naghachi Ricoh igwefoto dijitalụ photos.
Cheta na: Biko mee n'aka na gị Ricoh igwefoto ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa nwere ike ọma ejikọrọ na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị Ricoh igwefoto ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa
Ebe a mkpa ka ị họrọ mbanye akwụkwọ ozi maka gị Ricoh igwefoto ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa na pịa "iṅomi" na-amalite ịgụ isiokwu furu efu photos na ya.
Nzọụkwụ 3 Naghachi foto site na Ricoh igwefoto
Mgbe scanning, niile hụrụ faịlụ gị Ricoh ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa ga-egosipụta na "Audio", "Photo" na "Video" edemede. Ịnwere ike ihuchalu hụrụ photos otu otu na window.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike nye akara foto ị na-aga naputa site na gị Ricoh igwefoto na pịa "Naghachi" iji họrọ a ebe na kọmputa gị iji weghachi ha.
Olee otú Unformat Kaadị ebe nchekwa
Olee otú Naghachi Video faịlụ site camcorder